Otu esi achọ ihe onyonyo na Google | Ozi ECommerce
Encarni Arcoya | 26/10/2021 17:05 | Nkuzi na akuru
Mgbe anyị chọrọ ihe onyonyo, ihe kachasị mma bụ na anyị na-aga Google, chọọ okwu ma ọ bụ ahịrịokwu anyị chọrọ wee nye Images ka ọ were otu. Taa, mara ka esi eme ihe onyonyo google Ọ bụ ihe onye ọ bụla maara. Ma ihe nwere ike ọ gaghị ama bụ obere aghụghọ ndị ahụ, yana iwu kwadoro, ojiji, àgwà wdg. nke a.
N'ihi na, ị maara na ịse foto ọ bụla site na Google nwere ike bụrụ iwu na-akwadoghị? Na mgbe ahụ, ha nwere ike ịjụ gị uba maka iji ihe oyiyi na-enweghị ikike? Maka eCommerce, nke a dị ezigbo mkpa, ya mere anyị ga-akwụsị iji kọwaa ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ịchọ ihe oyiyi na Google.
1 Otu esi achọ onyonyo na Google
2 Kedu ihe kpatara na ị nweghị ike ibudata onyonyo n'efu na Google
3 Ihe a na-akpọ ngwá ọrụ ọchụchọ
3.1 Kedu ihe bụ ikikere Creative Commons
4 Otu esi amata ma enwere m ike iji foto Google
Otu esi achọ onyonyo na Google
Isi mmalite: masquenegocio
Dịka nyocha, ọ bụ ezie na nke a anyị maara na ọ gaghị abụ ihe ọhụrụ, ka anyị mee ka o doo anya otu esi achọ ihe oyiyi na Google.
Maka nke a, ị ghaghị mepee ihe nchọgharị Google, ma na kọmputa, mbadamba ma ọ bụ mkpanaka. Mgbe ahụ na search engine anyị na-etinye otu okwu ma ọ bụ okwu ndị na-anọchi anya ihe oyiyi anyị chọrọ. Dịka ọmụmaatụ "uwe elu". Nsonaazụ ga-apụta ga-adị iche iche, mana anyị nwere njikọ. Na anyị chọrọ oyiyi.
Ọ bụrụ na ị ghọtara, N'elu, okwu "ihe oyiyi" ga-apụta. na, ọ bụrụ na anyị pịa, nsonaazụ nke ihe nchọgharị ahụ ga-enye anyị ga-adabererịrị na ihe anyị chọrọ, ya bụ, nsonaazụ anya na foto.
Ugbu a, naanị ihe ị ga - eme bụ pịa onyonyo wee pịa bọtịnụ aka nri wee chekwaa onyonyo a. Ma, omume a nke yiri ka ọ dị njọ, n'ụzọ nwere ike itinye gị n'ihe ize ndụ.
Kedu ihe kpatara na ị nweghị ike ibudata onyonyo n'efu na Google
N'ozuzu, onyonyo niile pụtara na Google nwere ikike nwebiisinka. Ya bụ, enwere nwebiisinka. Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ị na-eji foto ahụ mana akwụghị ụgwọ maka ya, onye mere ya nwere ike kọọrọ gị ma rịọ ka akwụ ụgwọ x ego maka ojiji i jiri ya mee ihe.
Nke ahụ na-akpatakwa ihe ọjọọ.
Nsogbu bụ na, Mgbe ị na-elele foto sitere na Google, ọ naghị agwa gị n'ezie ma ọ bụ nwebiisinka ma ọ bụ enweghị ikike eze. Na ọbụna na-ekwu ya, e nwere mgbe ọ na-ezighị ezi na-enye gị nhọrọ na, mgbe e mesịrị, ị ga-ehichapụ n'ihi na ị nwere ọgbaghara na ya.
Kedu ka esi arụ ọrụ mgbe ahụ?
Ihe a na-akpọ ngwá ọrụ ọchụchọ
Ị maara ihe oku ọchụchọ bụ? O kwere omume na ọ bụghị, ma eziokwu bụ na, mgbe ị na-aga ihe oyiyi, na otu menu, na njedebe nke ihe niile, na okwu "ngwaọrụ ọchụchọ".
Ọ bụ ihe dị oke mkpa, ọkachasị mgbe ị na-achọ onyonyo na Google. Gịnị kpatara? Ọfọn, n'ihi na ọ na-enye gị nhọrọ dị iche iche. Kpọtụrụ:
Nha. Ọ na-enye gị ohere iji nha nha, buru ibu, ọkara, akara ngosi, karịa ma ọ bụ na-enye nha nha.
Agba. Ọ bụrụ na ịchọrọ ilekwasị anya na usoro onyonyo nwere agba ụfọdụ.
Inddị. Ọ bụrụ na ịchọrọ clipart, GIF, eserese ahịrị.
Ụbọchị. Iji nyochaa ha site na ụbọchị ọ bụla ma ọ bụ ụbọchị a kapịrị ọnụ (awa 24, izu, ọnwa ...).
Ikike iji ya. Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa, ọ bụkwa na ọ na-enye gị ohere inyocha foto site na ikikere Creative Commons na ikikere azụmahịa na ikikere ndị ọzọ.
Kedu ihe bụ ikikere Creative Commons
Ikikere Creative Commons bụ ngwa ọrụ na na-enye gị ohere iji onyonyo ma ọ bụ ọrụ echekwara site na nwebiisinka na-enweghị ịrịọ ikike n'aka onye mere ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, site na ikikere a ị na-ahapụ iji ihe onyonyo nkeonwe na / ma ọ bụ nke azụmahịa.
Ugbu a, ị ga-akpachara anya n'ihi na enwere ikikere Creative Commons dị iche iche nwere ike ịkwụsị iji foto ma ọ bụ na ọ bụghị.
Nkwenye. Mgbe iji ya, ị ga-ekwenye na ọ bụ odee.
Nchọpụta na-abụghị nke azụmahịa. Mgbe ị nweghị ike iji ya na azụmaahịa.
Enweghị ọrụ mmepụta. Ọ bụ ikike nke ị nwere ike iji foto na ọkwa azụmahịa na nkeonwe. Mana ị nweghị ike dezie ya mana ọ ga-anọrịrị ka ọ dị.
Kedu ụdị onyonyo Google na-enye anyị na Creative Commons? Ihe nkịtị bụ na ọ na-enye anyị nke mbụ, nke nnabata, na-enye anyị ohere iji ya ma na ọkwa nke onwe na nke azụmahịa. Nsogbu bụ na mgbe ụfọdụ ihe nchọgharị n'onwe ya na nsonaazụ ya dara. Ya bụ, ị na-eji foto ma nwee ikike nwebisiinka n'ezie. Ọ bụrụ na nke ahụ emee ọ dị njọ, mana ị ga-adị njikere maka ya.
Otu esi amata ma enwere m ike iji foto Google
Ị maralarị ka esi achọ ihe onyonyo na Google, ịmara ka esi enyocha ha dabere na ihe ịchọrọ imezu, wee hụla onyonyo na-aga nke ọma. Mana enwere m ike ibudata ma jiri ya? Nke ahụ bụ ebe obi abụọ na-abata.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka iwu kwadoro dịka o kwere mee, anyị ga-agwa gị ka ị ghara iji Google chọọ ihe oyiyi, n'ihi na ihe ka ọtụtụ n'ime ha enweghị ike iji nnwere onwe ime nhọrọ, mana ha kwesịrị ịkwụ ụgwọ ikike maka ha.
Agbanyeghị, enwere obere aghụghọ nwere ike ịba uru. Ma ọ bụ mara ebe foto ahụ si abịa. Na enwere ụlọ akụ onyonyo efu, dị ka Pixabay, Pexels, Unsplash ... nke, mgbe anyị na-achọ onyonyo, nwere ike ịpụta na nsonaazụ ya. Ọ bụrụ na ị hụ na url nke onyonyo ọ bụla masịrị gị bụ nke ibe ụlọ akụ ihe onyonyo efu, mgbe ahụ ị gaghị enwe nsogbu. Oleekwa otú i si mara? Ịbanye foto.
Kama Google igosi ya wee budata ya n'ebe ahụ, ọ kacha mma imepe url nke nwere foto ahụ ma hụ ihe ibe ahụ nwere, ma ọ bụrụ na ọ bụ ụlọ akụ ihe oyiyi efu, ọ bụrụ na ọ bụ nke a na-akwụ ụgwọ, ọ bụrụ na ọ bụ blọgụ, wdg. Ọ bụ ụzọ kacha dịrị nchebe iji lelee ma ị nwere ike iji ya ma ọ bụ na ị gaghị eji. Gịnị ma ọ bụrụ na enweghị m ike ịhụ ihe ọ bụla? Ndụmọdụ anyị bụ ka ị ghara iji ya zere nsogbu.
Nsogbu ọzọ ị nwere ike ịhụ na ihe oyiyi Google bụ àgwà. N'ezie, nke a abụghị ihe kachasị mma n'ụwa, nke pụtara na ọ bụrụ na ị na-eji ha maka eCommerce ma ọ bụ ọrụ ọkachamara, ọ na-enye onyinyo ọjọọ. Ọzọ, anyị na-akwado ịkụ nzọ na ụlọ akụ ihe oyiyi, n'efu ma ọ bụ akwụ ụgwọ, nke na-enyere aka melite ọdịdị weebụ. Buru n'uche na ọ bụ echiche mbụ ị na-emepụta na onye ọrụ, ma ọ bụrụ na nke a adịghị mma, ị ga-enwekwu ihe isi ike ịre ha.
Ugbu a ịmara ka esi eme ihe onyonyo Google, ị ga-eji ya maka azụmaahịa ma ọ bụ gosi ihe ngosi blọgụ gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nkuzi na akuru » Etu esi achọ ihe onyonyo na Google